RTAD to ease rules for expired vehicle license and driver’s license | Myanmar Business Today
HomeAutomobileRTAD to ease rules for expired vehicle license and driver’s license
Road Transport Administration Department (RTAD) announced that it will ease fines and other fees for overdue or expired vehicle licenses and driver’s licenses since the operations of the department have been suspended during the pandemic.
The department will relax initial registration, overdue fines, and extension of vehicle licenses and driver’s licenses during the suspension of the department’s operations.
The department will work with traffic police to address the problems of car owners having trouble with the traffic police when being stopped and having to show their expired license due to the suspension of the RTAD’s operations.
“People complained when the department continued its operations during the COVID-19 and are now asking the department to resume its operations as they want car import permits,” an auto-dealer from Thingangyun Township said.
The Department of Road Transport Administration Department suspended its operations across the country starting from the third week of September and will only resume the operations only when the pandemic is controlled.
COVID ကာလတွင် ကညနလုပ်ငန်းများ ရပ်နား ထားခြင်းကြောင့် ယာဉ်လိုင်စင်နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် သက်တမ်းကျော်လွန်ခြင်းများကို စိစစ် ဖြေလျှော့ပေးသွားမည်ဟု ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
ထို့အပြင် လမ်းမပေါ်တွင်မောင်းနှင်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များအနေနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကိုလည်း ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ များနှင့် ညှိုနှိုင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ထိုသို့ဖြေလျှော့ပေးရာတွင်ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိစ္စရပ်များအား ရပ်နား ထားရသည့်ကာလများ၌ ဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်‌ကြောင်းသိရသည်။
“ကညနက ကိုဗစ်ဖြစ်ချိန်မှာတောင် လူတွေတိုး ပြီး လိုင်စင်ကိစ္စတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ အပြစ် တင်ကြတယ်။ အခုကားပါမစ်ကိစ္စတွေကြောင့် ကညနကို အမြန်ပြန်ဖွင့်ဖို့ ပြောလာကြပြန်တယ်”ဟု သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ရောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကညန လုပ်ငန်းများအားလုံးကို စက်တင်ဘာလ တတိ ယပတ်မှ စတင်ကာ ရပ်နားခဲ့ပြီး လူစုလူဝေးဖြင့် ပြုလုပ်ရသော ကညနလုပ်ငန်းများအား ကပ်ရော ဂါ အထိုက်အလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အများ ပြည်သူကိုကြိုတင်ကြေငြာအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Previous articleKorea-Myanmar Industrial Complex estimated to create 100,000 jobs
Next articleCentral Bank bought $43 million in October